na admin on 20-06-18
Kambani yedu inobhadhara kwete chete kuedza kwevashandi asiwo kwevashandi vemuviri uye hwepfungwa. Semuenzaniso, kambani yedu inoronga zvemitambo kusangana kurega vashandi vachirovedza muviri. Mwaka wadarika, vese vashandi vanotora chikamu chemitambo kusangana. Munguva yemitambo kusangana, isu takaisa sever ...
Yakakosha yeVashandi Kurumbidzwa Musangano wegore ra1999
Yakasarudzika Staff Commendation Musangano we 2019 2020/6/15, kambani yedu yakabata Outsential Staff Commendation Musangano we2009. Munguva yemusangano, kutanga, sahwira wedu Mr.Xie anopfupisa kuita kwegore rapfuura. Iro rekutengesa vhoriyamu yekutsvedza inomhanyisa ina ...
Makorokoto pawebhusaiti itsva ye Hang Hang Hongli Machchan Co, Ltd. yakatangwa zviri pamutemo!
na admin pa 20-06-17
Iyo kambani yakavambwa muna Nyamavhuvhu 2002 uye pari zvino ine vashandi vanopfuura makumi manomwe nemasereji egumi. Iyo kambani iri muLinpu Town Industrial Park, Xiaoshan, Hangzhou City, Zhejiang Province, imwe makiromita kubva kuLinpu Kubuda kweHangjinqu Highway ...